4 Ụzọ Watch iTunes Movies on TV
Onye na-adịghị amasị m ịgbazite si ma ọ bụ site na fim si iTunes ụlọ ahịa? Ọ bụ ihe kasị adaba na nke ọma n'ọbá akwụkwọ nke na fim na e Akara. Mfe ịnweta ma ọbụna mfe na-ekiri na na nnọọ elu àgwà nke image n'ikuku, nke a bụ nhọrọ nke na-a ọtụtụ ndị na-eme mgbe ha na-ehi ụra na a izu ụka. Nsogbu na-a ọtụtụ ndị na-enwe bụ na, n'agbanyeghị na ha nwere ike ịnweta ndị a na fim na nke ọ bụla ha Apple ngwaọrụ, ha na-enwe nsogbu bụ isi mgbe ha chọrọ na-ekiri ndị a nkiri na a ibu ihuenyo ma ọ bụ na ha telivishọn. Ebe ọ bụ na na mma nke ịnweta fim na vidiyo si na iTunes dị elu, anyị na-aghọta na ị nwere nza nke echekwara nkiri na gị fated iTunes n'ọbá akwụkwọ, nke ma e ebudatara ma ọ bụ zụrụ.
Ikiri iTunes nkiri na TV pụrụ ịbụ otutu fun karịsịa na ị ezinụlọ na ndị enyi n'ihi na mma ezu. Isiokwu a na-aga na-ekwurịta banyere 4 isi ụzọ nke ị nwere ike ịnweta ma na-ekiri iTunes nkiri na gị TV na-eme ka ka mma video ekiri ahụmahụ. Soro ndị a iji a T na-nnukwu uru.
Part 1: Watch iTunes nkiri na TV site ọkụ a DVD
Part 2: Watch iTunes nkiri na TV site na kọmputa
Nkebi nke 3: Watch iTunes nkiri na Apple TV
Nkebi nke 4: Watch Video si gị iPad na gị TV
Nzọụkwụ 1 - Burning videos ka a DVD bụ ụzọ kasị mma nke otu onye nwere ike nweta ihe ọ bụla nkiri ọ bụla na isi iyi. Otu bụkwa eziokwu maka iTunes. Ọtụtụ n'ime ndị iTunes fim na-na M4V Ọkpụkpọ na isi ihe bụ nsogbu bụ na ọ na-emekarị s na-echebe site Apple si DRM.
Nzọụkwụ 2 - M4V DRM faịlụ n'ozuzu nwere ike-ọkụ jidesie DVD n'ihi nke ikike na-ichebe ọdịnaya na dị site videos. N'ihi na nke a na DRMs nwere na-ewepụ ma na nwere ike mgbe ahụ na-egwuri jidesie TV na site a ọkpụkpọ. Nzọụkwụ na-esonụ mere bụ na ịgbawa ndeputa nchebe nke dijitalụ ọdịnaya site iTunes fim na mgbe ahụ idetuo DRM-free nkiri na ka a DVD nke gị nhọrọ.
Nzọụkwụ 3 - One nke kacha ụzọ nke na-eme nke a bụ site na software Wondershare Video Converter Ultimate nke bụ ihe kasị mma na omume nke nwere ike inyere gị na iwepu DRM-eme ka gị DVD ke kiet ke otu laa. A DRM remover yana DVD onye nke a bụ gị enyi kasị mma na nke a nyere ọnọdụ. .
Nzọụkwụ 4 - One n'ókè nke na ị ga-echeta mgbe iji MAC PC maka otu bụ na usoro ihe omume dị iche iche. Wondershare Video Converter Ultimate for Mac Bụ ihe ị ga-achọ. Ma buru n'obi na Mac version ga-enwe ike iji wepụ DRM nchebe site iTunes maka gị.
Nzọụkwụ 5 - Ị ga-wụnye ihe omume na-agba ya. Ị ahụ ga-aga apa taabụ wee họrọ Tinye Files ịgbakwunye iTunes Movies na ị chọrọ izipu a DVD nke ahụ ga-eji na-egwu na TV.
Nzọụkwụ 6 - Site mgbe ahụ na-ahọpụta ndị DVD menu na ịpị "Ọkụ" i nwere ike na-amalite na-ere ọkụ na DVD si iTunes nkiri faịlụ. N'ihi na-echebe M4V faịlụ, ị chọrọ iji nweta ihe ọzọ converted format na ga-ewepụ DRM na ị pụrụ gaba dị ka n'elu.
Nke a bụ ihe Wondershare Video Converter Ultimate Interface anya dị ka:
Nzọụkwụ 1 - Ọ bụrụ na ị na-ama nwere iTunes na kọmputa gị mgbe ahụ ụzọ ọzọ i nwere ike salvage ndị ịgbaziri agbaziri fim si na-aga n'efu na-egwu vidiyo na iTunes site na kọmputa. Site na ijikọ kọmputa na TV ị pụrụ ime ka n'aka na ị na-ekiri otu site iTunes na jikọọ na kọmputa.
Nzọụkwụ 2 - Ọ bụrụ na ị nwere ike nweta ihe HDMI USB mgbe ahụ ọtụtụ n'ime nsogbu gị nwere ihe karịrị. Site kpọmkwem ejikọta ihe bụ anya na kọmputa gị na na TV ị ga-enwe zuru okè nnyefe na-na-adịghị emetụta oyiyi mma na definition.
Nzọụkwụ 3 - Ị nwere ike iji TV ime akara gaa ọnọdụ. Ntọala ga-dee mgba ọkụ maka TV si ọsọ ọsọ ziri ezi na n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ị pụrụ ọbụna jikọọ na ịtọ ndịna-emeputa nkwụnye na-anọgide na-ahọrọ na-eji TV ihuenyo dị ka ileba anya ebe ị ga-isi-ekiri fim. Site na iji nke a dị mfe nzọụkwụ ị nwere ike igwu ọ bụla iTunes on gị họọrọ ihuenyo nke na-ekiri. Unu na-na popcorn site gị n'akụkụ.
Nzọụkwụ 4 - I nwekwara ike sonyere gị na kọmputa gị na TV site ọzọ di iche iche nke ọdịyo na video cables. Iji jikọọ audio cables ị ga-mkpa iji nweta a Miniplug na-RCA stereo USB na site na njikọ a gị headphone Jack na kọmputa gị na ọdịyo n'ọdụ ụgbọ mmiri na gị TV. N'ihi na a video ọsọ ọsọ ị ga-mkpa abụọ ụzọ. Bụrụ na ị nwere S-video njikọ na PC mgbe ahụ i nwere ike iji ihe S-video USB jikọọ na RCA ọdụ ụgbọ mmiri na dị na gị TV. A VGA ma ọ bụ DVI njikọ nwere ike inye aka kpọmkwem Ijikọ TV na kọmputa gị, na-eme na ngosipụta ọrụ dị ka a ileba anya.
Nzọụkwụ 1 - Ụzọ ọzọ na-ekiri iTunes fim na vidiyo na TV na gị ntụrụndụ bụ na jikọọ Apple TV. Pụtara n'ihi na a nzube kpọmkwem naanị, Apple TV nwere ike jikọọ fim si gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na TV, na nke ị chọrọ na-ele gị na fim.
Nzọụkwụ 2 - Site na nkweta mmekọrịta fim na-amasị gị si gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na Apple TV igbe, ị ga-enwe niile họrọ fim i nwere jikọọ a ibu ihuenyo nke bụ isi ndiiche na otu chere ihu na iPods na iPads , n'agbanyeghị na ha nwere elu video mmepụta. . Ọ bụrụ na ị nwere otu Apple TV mgbe ahụ nsogbu gị ga-ebelata ka a dị ukwuu nta nke nke nanị ejikọta nke cables. .
Nzọụkwụ 3 - Ọ bụrụ na site ohere ọ bụla ị na-adịghị nwere otu Apple TV mgbe ahụ i nwere ụzọ ndị ọzọ nke alụso nsogbu a. Ma tupu gafere nzọụkwụ ndị a ị nwere ike họrọ nke nwere ike ịbụ ihe ndị kasị eri irè ụzọ ka ị.
Nzọụkwụ 4 - Ị ga-achọ na njikọ Ịntanetị iji strimụ na fim si Apple TV. N'ihi na mma foto àgwà ị ga-achọ ka a widescreen enwekwukwa definition TV ma ọ bụ elu definition TV. The Mac ma ọ bụ PC iTunes ga-ezu iji strimụ niile chọrọ fim na ị chọrọ enuba na.
E nwere ihe abụọ ụzọ n'okpuru a nwere ike inyere gị na-ekiri vidio on a TV. Mbụ ÍÀ nhọrọ nke airplay na ndị ọzọ bụ nhọrọ nke na ijikọ iPad ka TV ozugbo. Edi kûfre suut gị n'akpa uwe na fancy ike ga-eji mbuso ahuokika na ị na-enwe mmetụta.
Nzọụkwụ 1 - The airplay atụmatụ e malitere kpọmkwem maka ndị na-achọ na-ekiri fim online na ha TV. Ị nwere ike iji wireless usoro na-ekiri Commercial flicks nakwa dị ka vidiyo ị gbara na ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ fim iPad na Apple TV igbe. E nwere mkpa na i nwere HDTV maka otu.
Nzọụkwụ 2 - Ozugbo ị na-amalite na-ekiri ọ bụla nkiri na iPad, ị nwere ike enweta ndị na airplay button nke unu ga-enwe ike ịchọta na mwube ngalaba nke video njikwa. Ezie na ị ga-enwe ike na-ekiri nanị otu ihuenyo na otu laa, ị ka ga-enwe ike enuba ọ bụla nke na fim na i a na-ekiri ka Apple TV igbe na mgbe ahụ i nwere na-ezo aka nzọụkwụ na-echegbu ndị Apple TV ngalaba.
Nzọụkwụ 3 - The akụkụ kasị mma banyere usoro a bụ na mgbe gị nkiri na-nkwanye na TV ị nwere ike multitask na ị mbadamba na-anọgide na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na gị ugboro bụ kpam kpam free. Gị na ụmụaka nwere ike ịnọgide na-ekiri fim na ụtọ onwe ha mgbe ị rụchaa gị jide ọrụ. Ọ ga-kwuru na ịgbaziri agbaziri fim na-egosi nsogbu mgbe a na-ofu ruo a TV.
AV nkwụnye cables
Ị nwere ike ịzụta ihe nkwụnye ọkụ USB ma sonyere ha ka ha na TV otú na-amamiihe foto mma. Ndị a cables na-emekarị ọnọ site Apple onwe ya ma ị nwere ike ọ gaghị na-aga na n'ihi na oké ọnụ cables site n'aka-ha anya na mpaghara na ahịa. Nke a ga-azọpụta gị a mara mma penny mgbe n'ịtụle n'ozuzu na-eri na-ekiri ihe nkiri na a TV.
1. Watch iTunes nkiri na TV site ọkụ a DVD
Free Ee Mfe. Mkpa iji wụnye omume
2. Watch iTunes nkiri na TV site na kọmputa
Na-eri nke HDMI cables $ 50-60 Ee Siri ike. Mkpa iche USB na ihe ọmụma
3. Watch iTunes nkiri na Apple TV
Apple TV $ 250 Ee Siri ike. Mkpa denye aha
4. Watch Video si gị iPad na gị TV
Na-eri nke airplay, na-eri nke Gịnị si Apple ma ọ bụ n'ụzọ Ee Mfe. Mkpa ịbụ Apple ngwaahịa
> Resource> iTunes> iTunes Movies maka a TV Marathon